विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनाए सहमत !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनाए सहमत !!
विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनाए सहमत !!
काठमाडौँ । अहिले अंगिकृत नागरिकताको वहसले मुलुकमा चर्चा छ । विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा राजनीतिक दलका नेताका विचमा वहस जारी छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरु यो प्रावधानको विपक्षमा छन् भने नेकपाले आफ्नो केन्द्रिय समितिवाट पास गरिसकेको छ ।
जसपाको सांसद सरिता गिरीले नेपालको नयाँ नक्सा र भारतद्धारा अतिक्रमित भूमीका बारेमा दिएको अभिब्यक्ति लगत्तै आएको यो अंगिकृत नागरिकताको वहसलाई मधेसवादी दलका नेताले भारतीय वुहारीलाई मात्र हेरेर प्रतिकृया दिएका छन् । चर्चामा रहेको यो विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि प्रतिकृया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एउटा ट्वीट गर्दै उनले त्यसवारे आफ्नो प्रतिकृया सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले टुइट गर्दै लेखेका छन् विश्वमा सबै देशका नागरिकता सम्बन्धी आ(आफ्नै कानून भएको बताएका छन् । कुनै पनि सार्वभौम देशको आफ्नै प्रकारको कानून हुने उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन् “देशको नियम कानून समयानुसार फेरबदल हुनु आवश्यक पनि हुन्छ । जनमतको कदर गर्नु सबै राजनैतिक दलको अनिवार्य दायित्व पनि हो।”
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । जसमा विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने उल्लेख छ । त्यस भन्दा अघिका लागि सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउने परिचय पत्रको ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई झन्डै २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाए पनि मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् ।